သင့် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ဒါတွေ ထားနေရင်တော့ သေချာပေါက် လာဘ်ပိတ် စေပါပီ…
January 13, 2022 sonsonlinlin 0
သင့် ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ဒါတွေ ထားနေရင်တော့ သေချာပေါက် လာဘ်ပိတ် စေပါပီ… စွမ်းအင်တွေအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ဝါစတုသျှတ္တရပညာအရစကြာဝဠာထဲမှာ အလိုအလျောက်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အရာတွေရော လူသားတွေဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့ မည်သည့်အရာမဆို အကုန်လုံးမှာ တစ်ခုထက်ပိုတဲ့စွမ်းအင်ရှိနေကြတယ် ဆိုတာ လေ့လာသိရှိခဲ့ရသလို ဒီအထဲမှာမှမိမိအသုံးပြုနေတဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေထည့်ထားမိတဲ့အခါမကောင်းတဲစွမ်းအင်တွေဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ – ငွေကုန်ကြေးကျ၊ ငွေယိုပေါက်တွေများလိမ့်မယ်။ – ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေကြုံရသလို လာဘ်ပိတ် တာတွေ။ – ငွေကြေး အလိမ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပြီး ကောင်းသောစွမ်းအင်တွေဖြစ်စေတတ်သည့်အရာတွေကိုသင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာထည့်ထားခဲ့မည်ဆိုလျှင် […]
ဇာတ်တော်ထဲက မိန်းမပျက် အင်္ဂါရပ် (၂၅)ရပ် ပြည့်တန်ဆာတူတဲ့ မိန်းမဆိုတာ မိန်းမပျက်အင်္ဂါ ၂၅ ချက် ၁။ လင်ယောကျ်ား အရပ်တစ်ပါးသွားတာကို ချီးမွမ်းတတ်ခြင်း။ ၂။ အရပ်ဝေးသွားသော လင်ယောကျ်ားအား အမှတ်မရတတ်ခြင်း။ ၃။ လင်ပြန်ရောက်လာသည်ကို မနှစ်သက်ခြင်း။ ၄။ လင်ယောကျ်ား ဂုဏ်ကျေးဇူးမဲ့အောင် ပြောဆိုတတ်ခြင်း။ ၅။ လင်ယောကျ်ားအပေါ်တွင် ချီးမွမ်းစကား မပြောဆိုတတ်ခြင်း။ ၆။ လင်ယောကျ်ားအပေါ်တွင် အကျိုးမဲ့ကိုသာ ပြုတတ်ခြင်း။ ၇။ လင်ယောကျ်ားအပေါ်တွင် အကျိုးရှိသည်ကို […]
ကိုယ်နဲ့ တစ်ညစာပျော် ဖို့ ခေါ်လာတဲ့ အပျော်မယ်လေး ကို သူတောင်းစား ကိုပေးပြီး ပျော်ခို င်းလိုက်သောအခါ
ကိုယ်နဲ့ တစ်ညစာပျော် ဖို့ ခေါ်လာတဲ့ အပျော်မယ်လေး ကို သူတောင်းစား ကိုပေးပြီး ပျော်ခို င်းလိုက်သောအခါ ဘားတခုထဲကနေ အရက်တွေ အရမ်းကိုမူးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် အရက်တစ်လုံး နဲ့ ညည့်ဌက်ကလေးတစ်ယောက် ဆွဲပြီး ထွက်လာသတဲ့…. အဲ့ဒီမှာပဲ ဘားအရှေ့မှာ တောင်းရမ်း စားသောက်နေတဲ့ သူတောင်းစား တစ်ယောက်က ဗိုက်အရမ်းဆာနေတဲ့အတွက်ကြောင့် … သူ့ကို အစားစားဖို့ ငွေစကြေးစ အနည်းငယ်လောက် စွန့်ကြဲဖို့ အမူးသမားကို တောင်းရမ်းပါတော့သတဲ့…. အဲ့ဒီမှာပဲ […]